Union Minister U Kyaw Tin meets with Special Representative of UNSG for Children and Armed Conflict – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
TAt the meeting, they discussed Rakhine State issue including repatriation, resettlement and rehabilitation of displaced people, finalizing the implementation of project between Myanmar and UN to prevent and reduce recruitment of children for military and cooperation for further achievement in promoting child rights in Myanmar.
TSimilarly, Union Minister U Kyaw Tin also received Ms. Debra Eisenman, Managing Director of the Asia Society Policy Institute at 10 am on the same day. At the meeting, the Union Minister briefed her on Myanmar’s achievements in solving Rakhine State issue, including repatriation, resettlement and rehabilitation of displaced people.
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကလေးသူငယ်များနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၂-၁၀-၂၀၁၈ ရက်၊ နယူးယောက်မြို့)
(၇၃) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်လျက်ရှိသော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ကိုယ်ခွဲခေါင်းဆောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်၊ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၁၀ဝ နာရီတွင် နယူးယောက်မြို့၊ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ၌ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကလေးသူငယ်များနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Virginia Gamba အား လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် အရွယ်မရောက်သူများ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ တားဆီးလျှော့ချရေး ပူးတွဲစီမံချက် အပြီးသတ် အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များ၊ ကလေးသူငယ်များ အခွင့်အရေး ပိုမိုတိုးတက်ရရှိရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့အတူ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ယင်းနေ့ နံနက် ၁၀ဝ၀ နာရီအချိန်တွင် Asia Society Policy Institute မှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Ms. Debra Eisenman အား လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။